Lalàna & Zo: Vavolombelon’i Jehovah any Torkia | JW.ORG
Topy Maso An’i Torkia
Efa nisy Vavolombelon’i Jehovah tany Torkia nanomboka tamin’ny 1931. Nenjehina foana izy ireo, ary taloha kelin’ny 1990 izany vao nijanona. Nijanona tsikelikely ny fanenjehan’ny fanjakana taorian’izay, ary navelan’izy ireo hivavaka malalaka ny Vavolombelon’i Jehovah. Tsy neken’ny mpitondra fanjakana anefa ny fangatahan’ny Vavolombelona mba hanoratra ara-dalàna ny fikambanany. Nandresy tany amin’ny fitsarana tiorka anefa ny Vavolombelon’i Jehovah ka nekena ho ara-dalàna izy ireo, tamin’ny Jolay 2007. Azo lazaina hoe malalaka ihany ny Vavolombelon’i Jehovah ankehitriny satria afaka mivory sy manao zavatra hafa mifandray amin’ny fivavahany.
Tsy manaiky ny zo tsy hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretana anefa ny fitondram-panjakana tiorka, hatramin’izao. Imbetsaka àry ny Vavolombelon’i Jehovah, izay tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany, no nantsoina hanao miaramila, nampakarina fitsarana, nampandoavina vola be ho sazy, ary nogadraina. Naharitra taona maro izany. Efa intelo izay ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona (CEDH) no namoaka didim-pitsarana nanome rariny ny Vavolombelon’i Jehovah, nanomboka tamin’ny 2011. Namoaka didy manome rariny azy ireo koa ny Komitin’ny Firenena Mikambana Miaro ny Zon’olombelona, tamin’ny 2012. Mbola miampanga ny tovolahy Vavolombelona tsy mety manao miaramila foana anefa i Torkia.
Novan’ny fitondram-panjakana ny lalàna teo an-toerana, tamin’ny 2003, ka lasa mahazo manorina trano hivavahana mba hampiasainy ny fivavahana tsy silamo. Rehefa tena angatahana an’izany anefa ny manam-pahefana sy ny fitsarana any an-toerana, dia tsy manaiky mihitsy izy ireo hoe “toeram-pivavahana” ny Efitrano Fanjakana an’ny Vavolombelon’i Jehovah. Mandinika raharaha roa mifandray amin’izany izao ny CEDH.